China Triple Wavelength 755 810 1064 Diode Laser Hair Removal Machine factory na ndị na-emepụta ihe |KEYLASER
Ogologo Wave ogologo atọ 755 810 1064 Igwe na-ewepu ntutu isi Diode Laser na-adịgide adịgide
ICELEGEND ọhụrụ ahụ bụ nnukwu ike diode laser platfom, nke na-eji ogologo wavelength atọ na njikwa ntụpọ buru ibu.
Coolite BOLT nakweere Ultra Short Pulse na High Peak Power, na-ebuga mkpirisi mkpirisi iji bibie ntutu isi site na ọkụ ọkụ ngwa ngwa.
Mwepụ ntutu diode Laser-K16
Nhazi igwe oyibo dual Cooling nwere ikike na-enyere aka ịrụ ọrụ na-adịgide adịgide, na-echebe elu akpụkpọ ahụ pụọ n'ihe egwu na-ere ọkụ ma mee ka ọgwụgwọ ahụ nwee ntụsara ahụ na-enweghị atụ na nke enweghị mgbu.
Isi Iyi Ìhè Laser diode
Ogologo ogologo 808nm / 808nm+755nm+1064nm
Interface ọrụ 10.4 inch ihuenyo mmetụ LCD
Nha ntụpọ 12*12mm 12*16mm
Ike Laser 1000W
Sistemụ jụrụ oyi TEC ikuku jụrụ oyi + mmiri jụrụ oyi + ikuku
Nha ịbụ 30KG
1. 10.4 inch agba mmetụ LCD ngosi, multilanguage họrọ.
2. Germany webatara ogwe laser diode.
3. Japan webatara Cooling element.
4. Germany webatara mgbapụta mmiri, enweghị mkpọtụ na ogologo ndụ.
5. International ntutu mwepụ Golden Standard.
6. TEC na-eme ka ọ dị jụụ, awa 24 na-arụ ọrụ na-enweghị nkwụsị.
7. Ọgwụgwọ ngwa ngwa na-adịghị mma na-adịghị emetụta ya.
Nke gara aga: Anọ ogologo wavelength diode laser iwepụ ntutu isi sysyem
Osote: Ọnụ ego ala China Portable 808nm Ọkachamara Soprano Ngwa Ngwa Ngwa Ahụike Mma igwe Diode IPL Shr Elight Laser Mwepụ ntutu.